Tonga amin'ny sambo fitsangantsanganana any Nouvelle Zélande
Vaovao momba ny mpitsidika eTA New Zealand
«Lahatsoratra taloha Lahatsoratra manaraka »
Ny governemanta New Zealand dia nametraka politika fitsangatsanganana vaovao ho an'ireo mpitsidika sy mpandeha mpandeha amin'ny firenena sasany izay mety hisy fiantraikany eo aminao, ity politika vaovao / politika fitsangatsanganana ity dia antsoina hoe NZeTA (New Zealand Electronic Travel Authority) ary ny mpitsangatsangana dia angatahina hangataka ao amin'ny NZeTA (New Zealand eTA ) amin'ny Internet telo andro mialoha ny diany.
Ireo mpandeha Cruise Ship dia handoa ny fiarovana ny mpitsidika iraisam-pirenena sy ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany (IVL) amin'ny raharaham-barotra mitovy amin'ny NZeTA.
Ny Nationality rehetra dia afaka mangataka amin'ny NZeTA raha avy amin'ny Cruise Ship
Ny olom-pirenena misy zom-pirenena dia afaka mangataka amin'ny NZeTA raha tonga any New Zealand amin'ny sambo fitsangantsanganana. Na izany aza, raha tonga amin'ny rivotra ny mpandeha dia tsy maintsy avy amin'ny firenena Visa Waiver na Visa Free ny mpandeha, dia ny NZeTA (New Zealand eTA) ihany no manan-kery ho an'ireo mpandeha tonga ao amin'ny firenena.
Mponina maharitra aostralianina tonga amin'ny alàlan'ny Cruise Ship mankany New Zealand
Raha mponina maharitra any Aostralia ianao dia mila mangataka NZeTA (New Zealand eTA) alohan'ny handehananao mankany New Zealand.
Fotoana tsara indrindra handehanana any Nouvelle-Zélande amin'ny alàlan'ny Cruise Ship ho an'ireo manana NZeTA
Ny ankamaroan'ny zotram-pitsangatsanganana dia mitsidika an'i Nouvelle Zélande mandritra ny vanim-potoana fitsangantsanganana amin'ny Oktobra-Aprily. Ny vanim-potoana fitsangantsanganana fohy kokoa dia mihazakazaka manomboka ny volana aprily ka hatramin'ny jolay. Ny ampahany lehibe amin'ireo fikambanana tena fitsangatsanganana dia manolotra fitantanana fitsangatsanganana any Nouvelle Zélande.
Amin'ny vanim-potoanan'ny taonan'ny fikosoham-bary dia sambo miavaka mihoatra ny 25 no mitsidika ny morontsirak'i Nouvelle-Zélande. Ny fitsangatsanganana eo anelanelan'i Aostralia sy Nouvelle-Zélande dia manome ny vintana hizaha ny faritra rehetra amin'ny halavan'ny Nosy Avaratra sy Atsimo.
Ny ankamaroany dia miala any Auckland any New Zealand, na Sydney, Melbourne na Brisbane any Australia. Matetika izy ireo dia mitsidika ireo tanàna kendrena any New Zealand, Bay of Islands, Auckland, Tauranga, Napier, Wellington, Christchurch, Dunedin ary Fiordland. Ny Marlborough Sounds sy ny Nosy Stewart dia seranan-tsambo malaza ihany koa. Hamarino fa raha tonga amin'ny sambo fitsangantsanganana mankany New Zealand ianao dia efa nangataka fangatahana eTA New Zealand (NZeTA). Azonao atao ny mizaka ny zom-pirenena amin'ny firenena rehetra, azonao atao ny mangataka amin'ny NZeTA amin'ny Internet.
Lisitry ny sambo fitsangantsanganana ho an'ny mpitsidika an'i NZeTA
Ny fitsangatsanganana an-tsambo dia mitsidika ny seranan-tsambo lehibe sy ny toerana mahafinaritra any ivelany ary ireo toerana tsy dia lavitra ary toerana lavitra kokoa izay tsy hitan'ny mason'ireo sambo fitsangantsanganana lehibe.
Ny làlana nalehan'ireo fitsangantsanganana an-tsambo dia misy an'i Stewart Island na Kaikoura enroute mankany New Zealand. Ny làlana malaza iray hafa dia ny Nosy atsimo mankamin'ny nosy atsimon'ny Antarctic.
Raha toa ianao ka tonga amin'ny iray amin'ireo tsipika fitsangantsanganana etsy ambany mankany Nouvelle Zélande dia mila eTA New Zealand ianao (NZeTA) na inona na inona firenenao. Tokony hangataka Visa ihany anefa ianao raha tsy avy amin'ny a Firenena Visa Waiver ary avy amin'ny rivotra.
Karnavalin'ny Cruise Lines
Cruises Princess Coral
Fitsangantsanganana an-dranomasina kristaly
Ny dian'ny Phoenix
Regent Ranomasina Sehen du Regent
Hamarino fa efa nohamarininao ilay fahazoana mandray anjara amin'ny eTA New Zealand anao. Raha avy amin'ny a ianao Firenena Visa Waiver avy eo azonao atao ny mangataka eTA na inona na inona ny fomba fitetezam-paritany (Air / Cruise). Olom-pirenena Etazonia, Teratany Kanadiana, Teratany Alemanina, ary Olom-pirenena anglisy afaka mangataka amin'ny Internet ho an'ny New Zealand eTA. Ny mponin'i United Kingdom dia afaka mijanona ao amin'ny New Zealand eTA mandritra ny 6 volana raha ny hafa kosa mandritra ny 90 andro.